nitrangana fanafihana cash point teny Isotry tamin’io andro io ka jiolahy miisa dimy no nanao azy niaraka amin’ny basy poleta 2. Rehefa vita ny fanafihana dia lasa nandositra ireo jiolahy. Ny polisim-pirenena vao naheno antso dia nidina teny an- toerana ary nametraka sakan-dalana maromaro sy nisava ireo fiara manodidina ny faritra Isotry iny. Ny harivan’io ihany dia tra-tehaka tetsy 67 ha tao anaty fiara iombonana ny jiolahy 1 anisan’ny nanafika tamin’io andro io. Rehefa nosavaina dia nahitana ireo antontan-taratasin’ilay cash point novakiany tany aminy. Nohadihadiana teny amin’ny polisy ity farany ary rehefa natolotra ny fitsarana afak’omaly dia nidoboka am-ponja vonjimaika Tsiafahy. Mitohy ny fanadihadiana mahakasika ity raharaha ity.